एउटा बहानामा सेयर बजार बन्यो 'रकेट' » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एउटा बहानामा सेयर बजार बन्यो ‘रकेट’
आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ -नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली यसै महिनाबाट परीक्षण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यस सम्बन्धमा नेप्सेले शनिबार राजधानीमा पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीको डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत गर्यो । सो लगत्तै आइतबारको बजारमा त्यसको सकरात्मक असर परेको छ ।
नेप्सेले पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली यसै महिना सेयर दलालहरुको माध्यमबाट लगानीकर्तासम्म पुर्याउने तयारी गरिरहेको शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बताइएको थियो । वाइको कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार १४ महिनामा प्रणालीको विकास भई नेप्सेले औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्न बाँकी छ ।
लगानीकर्तामा अनलाइनको प्रयोग कसरी गर्ने ? अनलाइन हातमा आए पछि के-के सेवा पाइन्छ ? अहिलेको कारोबार प्रणालीभन्दा अनलाइन कसरी फरक छ लगायतका जिज्ञासा शनिबारको कार्यक्रममा मेट्ने प्रयत्न भएको थियो । यसबाट लगानीकर्ता उत्साहित बनेपछि आइतबार सेयर बजार खुलेको केही समयमा १७ अंक हाराहारीले उकालो लागेको छ ।
बजार खुलेको ३४ मिनेटमा जम्मा ३ करोडको सेयर कारोबार हुँदा बजार सूचक नेप्से १६.४० अंकले उकालो लागेको थियो । अहिले ५ करोडको सेयर कारोबार हुँदै गर्दा बजार १५.४० अंकले माथि गएको छ । जम्मा १ सय कम्पनीहरुको सेयर कारोबार भएको छ ।
लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै बजार आधुनिक हुने भए पछि कारोबार चाप बढेको बजारमा खरिद चाप धेरै देखिएको छ । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीको अधिक कारोबार भएको बजारमा सबै सूचकहरु उकालो लागेका छन् ।
नेप्सेका अनुसार सेयर दलाल मार्फत लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइने छ । नयाँ कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड पाएपछि ईन्टरनेटका माध्यमबाट सिधै सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन् । जसमा एकैदिन सेयर किनेर सोही दिन बिक्री गर्न सकिने बताइएको छ । यसका लागि कानुनी प्रकृया भने अझै बाधक बनेको छ । प्रणालीले भने यो व्यवस्थालाई पनि अंगिकार गरेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: मोदीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको राहुलको आरोप
NEXT POST Next post: किशोरी अवस्था मै पाठेघरको समस्या
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ १३:०८